कस्ता बदमास् हरू ? पाँच वर्षअघि म्याद सकिएका दाल अहिले बेच्दैछन्, उपभाेक्तामाथि खेलवाड | Jillakhabar.com
कस्ता बदमास् हरू ? पाँच वर्षअघि म्याद सकिएका दाल अहिले बेच्दैछन्, उपभाेक्तामाथि खेलवाड
मोरङ, १३ फागुन २०७७ ।
उपभोग्य मिति पाँच वर्ष अगाडि समाप्त भएको खाद्यसामग्री रहरको दाल बिक्री गरेको आरोपमा विराटनगरका एक व्यापारीलाई बुधबार रु तीन लाख जरिवाना गरिएको छ ।
Previous articleBreaking News: विद्यार्थी र शिक्षक एकाएक बिरामी पर्न थालेपछि विद्यालय बन्द
Next articleअब कुश्मिसेरा देखि बागलुङसम्म कालाेपत्रमा सरर: बागलुङ–कुश्मीशेरा सडक कालोपत्रे हुन थाल्याे